टिप्पणीः ‘निर्वाचन क्षेत्रबाट ५०% बढि मत ल्याउने मात्र निर्वाचित हुनुपर्छ’ - Naya Online
मङ्लबार, असार २९, २०७८ (July 13th, 2021 at 6:09am ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
२०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसको दुई तिहाइ सरकार किन टिकेन ?
२०४८ मा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार किन टिकेन ?
२०५६ मा काँग्रेस कै बहुमतको सरकार किन टिकेन ?
२०७४ को नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर एकत्रित भएको नेकपाको झन्नै दुई तिहाइ सरकार किन टिकेन ?
यी प्रश्नहरुबाट प्रष्ट हुन्छ कि संसदीय व्यवस्था भनेको अल्पमतले शासन गर्ने र बहुमत प्रतिपक्षमा रहने व्यवस्था हो । संसदिय व्यवस्थाका सांसदहरु बहुमतले निर्वाचित हुँदैनन् । ती त बढी मतले विजयी मानिने हुन् । त्यसकारण पनि यो संसदिय व्यवस्था होइन, संसदीय अव्यवस्था हो । ३२÷३५% मत प्राप्त गर्ने पार्टीको शासनलाई कसरी बहुमत भन्ने ? ६५% बहुमत त प्रतिपक्षमा हुन्छ ।
अब बहस गर्न जरुरी देखिएको छ –बहुमतीय प्रणालीको अर्थात निर्वाचन क्षेत्रबाट ५०% बढी भोट ल्याउने मात्र निर्वाचित हुने प्रणालीको । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिने प्रणालीको । त्यसमा सांसदले मन्त्री हुन नपाउने प्रणालीमाथि पनि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्विकारको मत (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था हुने प्रणाली र सम्पूर्ण शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुने प्रणालीको पनि बहस हुनुपर्छ ।
सबै जनता र नेताको स्वास्थ्य सेवा निशुःल्क, नेपालमा उपचार हुन नसके यहाँको डाक्टरको सिफारिसमा बिदेशमा हुने उपचारको जिम्मा पनि नेपाल सरकारको दायित्व हुने प्रणालीको पनि बहस हुनुपर्छ । बेरोजगारलाई रोजगार दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था सहितको प्रणालीको बहस हुनुपर्छ । युवाहरुलाई स्वदेश मै उपयोग गर्न सक्ने प्रणालीको बहस हुनुपर्छ ।
छलफल, बहस गर्न आवश्यक छ किनभने संसदीय प्रणाली नेपालमा असफल भइसक्यो ।